နှင်းဆီနီနီ: အစွန်း တဖက်မှာ....
ဟိုးအဝေးက သစ်ပင်တွေ အောက်မှာတောင်
ငါ.အနားက မင်းအရိပ်ပျောက်သွားမှာစိုးလို့ ...
မင်းဖုန်းဆက်ရင် မသိမှာကြောက်လို့ ...
မင်းကြောင်. ၀မ်းနည်းစရာတွေ ကြုံခဲ.ရင်တောင်
မင်းက ဂရုမစိုက်ခဲ.ရင် ကြေကွဲရမှာစိုးလို့ .........
ငါဟာ အဆုံးစွန်ထိ မုန်းတတ်တာ
ဘာတဲ. နင်.အတွက်ငါက စုန်းမ တယောက်ဖြစ်နေခဲ.သတဲ.လား
ငါ.ကြောင်. နင်.ရဲ. လွတ်လပ်မှုတွေ ဆုံးရှုံးခဲ.ရသတဲ.လား
ငါကပဲ အရှက်မရှိ နင်.ကို လိုက်တွယ်ကပ်နေမိသတဲ.လား...
ငါ.ရဲ. သ၀န်တိုမှုတွေက နင်.ကို ခြောက်ခြားစေခဲ. သလား...
ငါ.ရဲ. ဂရုစိုက်မှုတွေက နင်.ကို အနေကျပ်စေခဲ.သလား...
ငါ.ရဲ. အချစ်တွေက နင်.ကို မွန်းကျပ်စေခဲ.သလား....
ဒါဆိုရင် ငါ.ရဲ. အမုန်းတွေကရော
နင်.အတွက်အသားကျစေမလား.....
ငါမပါရင် နင်.ဘ၀မှာ ပိုနေပျော်နိုင်မလား....
ငါမရှိရင် နင်.ဘ၀ကို ချမ်းမြေ.စေမလား....
ငါကတော. နင်မရှိရင် မဖြစ်တဲ.သူမို့ ....
ငါကတော. နင်မပါရင် မပျော်နိုင်သူမို့ ....
ငါကတော. နင်မချစ်ရင် ရူးသွပ်နိုင်သူမို့ ....
.....ကဲ ဖတ်ပြီးတော. ဘယ်လိုခံစားရသလဲဟင်
အရမ်းချစ်တတ်တဲ. တနည်းပြောရရင် ရူးသွပ်နေတဲ. ကောင်မလေးတယောက်ရဲ. ခံစားချက်ကို ကိုယ်စားခံစားပြီး ရေးထားတာပါ...အဲ.ကောင်မလေးက သူ.ချစ်သူကို အရမ်းချစ်ပြီး သ၀န်တိုတတ်တယ်..ဟိုဟာမလုပ်ရဘူး ဒီဟာ မလုပ်ရဘူး ချုပ်ချယ်တတ်တယ်..ဟော အဲဒီတော. ဘာဖြစ်လာမလဲ ကောင်လေးကလဲ စိတ်ညစ်လာတာပေါ...အဲတာ အဲ.ကောင်မလေးမှားတယ်လို.မြင်လား ဒါမှ မဟုတ် သူက ချစ်တော.လဲ အဲလိုပဲဖြစ်မှာပေါ.လို. တွေးမလား.....
တကယ်တော. လူတယောက်ကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် ကိုယ် အတွက်ပဲ မစဉ်းစားပဲ သူအတွက်ကို အဓိကထား စဉ်းစားသင်.တယ်လို. မြင်ပါတယ်......နားလည်မှု မရှိတဲ. အချစ်က ရေရှည်မတည်မြဲနိုင်ဘူးလေ..................
......နောက်တခုကတော. ကောင်မလေးက သူချစ်သူကိုအရမ်းဂရုစိုက်ပါတယ်...အစစအရာရာပေါ.လေ အသေးအမွှားလေးက အစ လိုက်ပြီးလုပ်ပေးတယ်ဆိုပါတော.....ကျွန်မ အမြင်ပြောရရင်တော. လူတွေက အရမ်း အလေးပေးလွန်းရင် ရောင်.တက်ကြတယ်လို. ထင်ပါတယ်...အဲဒါကြောင်.လဲ အဲ.ကောင်လေးက မာန်တက်ချင်လာတာဖြစ်မှာပါ..............
မာန်တက်တဲ. ကောင်လေးမှာ အပြစ်ရှိသလား....အစစအရာရာ လိုက်ဖြည်.ဆည်းတတ်တဲ. ကောင်မလေးမှာ အပြစ်ရှိသလား.....ဒါကတော. ဘယ်သူမဆို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်နော်......
...............နောက်ဆုံးအနေနဲ. ပြောရရင် ဒီဘလော.လေးကို ရေးဖြစ်တဲ.ရည်ရွယ်ချက်ကတော. ဘယ်နေရာမဆို အစွန်းရောက်တာဟာ မကောင်းဘူးဆိုတဲ. သဘောကို သိစေချင်တာပါ .....ကိုယ်.ချစ်သူကိုအရမ်းချစ်ပြီး အရမ်း ဂရုစိုက်တတ်တဲ. ညီမလေးတို. ကို ပြောချင်တာကတော. ကိုယ်ပေးတဲ. ဂရုစိုက်မှုကို လက်ခံတဲ.သူက လိုလိုချင်ချင်ရှိရဲ.လား ဆိုတာ သတိထားစေချင်ပါတယ်......အားလုံးအတွက် ဆုတောင်းပေးချင်တာကတော. ကိုယ်ရနေတဲ. အချစ်၊ ကိုယ်နားမှာ ရှိနေတဲ. ချစ်သူကို တန်ဖိုးထားပြီး သာယာတဲ. ဘ၀လေးတခု တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေလို. ဆုတောင်းပေးပါတယ် ......
(........ဒီလိုပုံစံလေးကိုပထမဆုံး ရေးဖြစ်တာပါ ဘယ်သူကိုမှ မရည်ရွယ်တဲ.အတွက် တိုက်ဆိုင်မှုရှိရင်၊ အမှားပါခဲ.ရင် ခွင်.လွှတ်စေချင်ပါတယ်...........)
Posted by နှင်းဆီ at 11:36 PM
ရောင်နီလင်း November 28, 2011 at 4:30 AM
အရမ်းကောင်းပါတယ်...တိုက့် ဆိုင်မှု့ တွေရှိလို့ ..ပိုဖတ့် လို့ ကောင်းပါတယ်
Candy December 4, 2011 at 7:19 PM
အင်း ဟုတ်တယ်.. အလွန်အကျွံသ၀န်တိုတာ တော်တော်ဆိုးတယ်.. >.<